Amanqaku kaFrida Cooper Martech Zone |
Amanqaku ngu UFrida Cooper
UFrida Cooper ngumphandi wohlalutyo lokuthengisa malunga neminyaka emihlanu yamava.
NgoLwesithathu, Aprili 19, 2017 UFrida Cooper
I-E-Commerce ithatha ishishini lokuthengisa ngomzuzu. Ikwenza kube nzima ngakumbi ukugcina iivenkile ezitena kunye nodaka ziqhubeka. Kwiivenkile ezitena kunye nodaka, ayisiyiyo yokugcina impahla kunye nokulawula iiakhawunti kunye nentengiso. Ukuba usebenzisa ivenkile ebonakalayo, kuya kufuneka uye kwinqanaba elilandelayo. Nika abathengi isizathu esinyanzelayo sokuchitha ixesha labo behla kwivenkile yakho. 1. Ukubonelela ngamava, hayi nje iimveliso